जात्रा | मझेरी डट कम
Prakash Giri — Tue, 08/08/2017 - 17:57
मानिसहरू आफ्नो चरित्र छोपेर सधैँ झुटो आवरणमै त हिँडेका छन् यहाँ । तर खै आज मुकुटहरू नाँच्दामात्र चाहिं किन जात्रा भो ! अचम्म छ यहाँ... झुटको खेतीलाई कसैले जात्रा भन्दैनन् । तर व्यङ्यको नाम दिएर वास्तविकता दर्शाउदा चाहिं दुनियाले रमाइलो मानी मानी ताली पिट्छन् ।
"मसँग बिहे गर्यौ भने गाउँमा बस्नुपर्छ, सक्छ्यौ ?"
"अँ ! मलाई गाउँ मनपर्छ !"
"घाँस काट्न नजाने भैंसी बेचौँला, तर पँधेरीबाट पानी त बोक्नुपर्छ । सक्छ्यौ ?"
"....अँ ! गाग्री बोक्न नजाने बोतलमा ओसारेर पनि खुवाउँछु नि !"
...अँ साँच्ची जात्रा... मलाई जात्रा हेर्न सानैदेखि रमाइलो लाग्थ्यो । बजारका गल्ली गल्लीमा चल्दोरहेछ जात्रा । तर म बबुरो रित्तो खल्ती छाम्दै पर्खाल नागेर मेलामा छिर्थें । ...यही रित्तो खल्तीले त हो मैले अमेरीका र आष्ट्रेलीयाका मेला भर्न नपाएको ।
ऊ पनि जात्राकी शौखिन रहिछे...। अर्कैको टिकटमै पुगिसकीछे – मेलवर्न ! मलाई पनि खबर आ'को थियो – "सरी फर एभ्रिथिङ् । आई विल मिस यू !"
घरबेटीको सस्तोवाला घाम नपर्ने र ढुसी गन्हाउने कोठामा सुत्दा उसका चिसा यादहरू छेकिएनन् । सर्टिफिकेट जलाएर आगो तापेँ । एकछिन भए पनि न्यानो भो । अबको जाडो छेक्न के जलाउने अन्यौलमा छु । ...मन जलाएर न्यानो नहुने रहेछ, याद जलाउन नसकिँदो रहेछ ।
"मलाई पनि भेटाऊ न !"
"के भनेर भेटाउने ?"
"हुनेवाला बुहारी भन न !"
उसले आमालाई भेटी... । आमा अचम्म परेर गाउँ फर्किनुभाथ्यो ! म अचम्म परेर प्रेममा डुबिरहें ।
विदेशी नम्बरबाट म्यासेज आयो – "म तिमीलाई अलिकति पैसा पठाइदिन्छु ! आमालाई चुरा र पोते किनेर लगिदेऊ ल !"
"के भनेर दिनु ?"
"हुन नसकेकी बुहारीले पठाएकी भनेर देऊ ! ...यू नो...आई स्टिल लभ यू एण्ड मिस योर म म !"
"हो प्रभू... यहाँ जात्रा चलिरहेछ... !"
केको जात्रा छुट्याउन नसकी म त्यही जात्रामा नाँचिरहेछु । अरु यस्तै मुकुण्डो भिरेर नाँचिरहेछन्, म मुख देखाएरै नाँचिरहेछु । अरु बेचिएर नाँचिरहेछन्, म किन्न नसकेर नाँचिरहेछु... मेलबर्न र न्यूयोर्कको टिकट ।
खैर पीर छैन... उसले फेसबुक र म्यासेजमै त्यहाँका जात्रा देखाइरहन्छे !
आफ्नै जात्रा चलिरहेछ... । म आजकल इन्द्रचोकका जात्रा हेर्न जान्न ! कस्तो हुदैँछ भनेर कसैले नसोध्नु... ।